Izikhwama ezihamba phambili ze-Bulk FIBC Isikhwama Esingenamanzi I-1000kg Yokufaka Umkhiqizi Wefektri Yepulasitiki Engaphekiwe | JO EE
Ubuningi be-FIBC Isikhwama Sokungenisa Amanzi i-1000kg Ngokupakisha Izinto Zokusetshenziswa Kweplastiki
Inketho ephezulu (Ukugcwalisa): Vula okuphelele okuphelele
I-Loop Option (Ukuphakamisa): I-Cross Corner Loop
Inketho engezansi (Ukukhishwa): Flat Bottom
Ilayisha Isisindo: 500kg-1500kg
Indawo Yomsuka: HENAN, China
Usayizi: 90x90x110cm, ungenziwa egcizelele
Ukwakhiwa: Iphaneli ye-U, noma isikhwama se-tubular
Isici Sokuphepha: 5: 1
Igama lomkhiqizo: JO EE
Inombolo Model: Isikhwama Esinenqwaba
Igama: 100% entsha polypropylene k nokwelukiweyo isikhwama ngobuningi izikhwama ezinkulu 1000kg kusuka China
Izinto: 100% resin eseyintombi
Phezulu: Phezulu kuvulwe ngokugcwele
Ngezansi: Phansi phansi
Umbala: mhlophe noma njengoba isicelo sakho
Inketho ephezulu (Ukugcwalisa): Gcwalisa i-Spout ephezulu
Isici Sokuphepha: 6: 1
Ilayisha Isisindo: 20T
impahla: 100% Virgin Polypropylene
Ukugcwalisa ispout (inombolo): 1 noma 2 noma ukufunwa kwamakhasimende
Ukukhishwa kwe-spout (inombolo): 1 noma 2, noma ukufunwa kwamakhasimende
Inketho engezansi (Ukukhishwa): Nge-Spout
Indawo Yomsuka: IHenan, China
Igama: Amabhodlela Esitsha se-PP
Ukusetshenziswa: Ezokupakisha Ukupakisha
umbala: Isicelo seKhasimende
Ukuthunga: Ukuthungwa Kwezokuphepha
Ama-50pcs noma ama-20pcs nge-bale ngayinye, noma njengoba kudingeka i-100% entsha ye-polypropylene pp ephothiwe isikhwama senqwaba esikhwameni esikhulu esingu-1000kg esivela eChina
Ubuningi (Izingcezu) 1 - 50000 > 50000
Sizibophezele ekuxazululeni izinkinga ezahlukahlukene zokupakisha kumakhasimende ahlukile.Siyathengisa isikhwama ngobuningi，Isikhwama seJumbo, Isikhwama se-FIBC futhi Isikhwama eselukiwe se-PP ngoba EJapan, South Korea, Arabia, Jordan, Brazil, Mexico, Canada, United States nakwamanye amazwe.
Imvamisa i-MOQ is10,000pcs Kepha singakwenzela nemikhiqizo uma ubuningi bakho bungafinyeleli kwi-MOQ yethu, Kepha thina sinomthamo wethu omncane webhizinisi nge-oda ngalinye. Ngakho-ke inqobo nje uma usikhokhela inani elincane lebhizinisi, noma ngabe ubuningi bakho bungaphansi kwama-10,000pcs, singakwenzela nezikhwama ngokusho kwesidingo sakho.
Ungakwazi yini OEM？
Yebo, singakwazi i-OEM kuwe, ifektri yami ingakhiqiza ku-Logo yakho ye Isitsha Isikhwama Ton Isikhwama sesihlabathi isikhwama Isiyingi Isikhwama U-panel Bag.
Izinzuzo zokusebenzisa izikhwama eziningi ze-FIBC kusayithi lakho lokwakha
Uma ulayisha futhi uhambisa inani elikhulu lamatshe, amatshe, inhlabathi, imfucumfucu nezinye izinto zokwakha ezahlukahlukene, kubalulekile ukuthi isitsha esiningi siqine kakhulu futhi siphephe kakhulu ukusisebenzisa. Uma isetshenziswe kahle, ama-FIBC ayindlela ephephe ngokweqile yokuhambisa nokugcina izinto zokwakha. Ama-FIBC akhiqizwa kusetshenziswa i-polypropylene ephothiwe ukudala isitsha esinamandla esiqinile futhi esiguquguqukayo esisebenza kahle kakhulu ezinhlelweni eziningi zokwakha.
2) Ukulula Kwezokuthutha:
Ama-FIBC aguquguquka ngokwemvelo (yingakho igama lesitsha esiphakathi nendawo eliguqukayo) okwenza ukuwahambisa lapho ziya khona kube lula kunezinye izinketho. Akukhona nje kuphela ukuthi kulula ukulayisha izikhwama ezigcwele emalolini, futhi zingaba nesihloko esiseduze esiseduze ukuvimbela okuqukethwe kwesikhwama ukuthi kungawi futhi kudale izingozi ngesikhathi senqubo yokuhamba.
3) Ukusebenza Kwezindleko:
Ukusika izindleko nokonga imali kuyinto ehamba phambili kuwo wonke amabhizinisi. Izindleko zokuhambisa nokulahla izinto zokwakha zingabiza kakhulu futhi zingadla emaphethelweni akho asevele mancane. Lezi zikhwama azibizi nje kuphela, zisinda ngokwedlulele okungakusiza ukunciphisa izindleko zakho zokuhamba.
4) Ukusebenza kahle:
Usemabhizinisini okwakha. Uyazi ukuthi ukuba namathuluzi afanele omsebenzi kubalulekile ukuze ukwazi ukwenza ezingeni lakho eliphakeme. Ukuba nesiqukathi senqwaba esifanele sokusebenza kwakho akuhlukile. Ukusebenzisa kahle izikhwama eziyinqwaba kungenza ukusebenza kwakho kuphumelele futhi kusebenze ngokwengeziwe.
5) Ukuqaphela Imvelo:
Ezinye izikhwama zenzelwe ngqo ukusetshenziswa okuningi futhi zenziwa ngenani eliphakeme lokuphepha le-6: 1. Lapho usebenzisa izikhwama, kufanele zisetshenziswe kuhlelo oluvaliwe lwe-loop futhi ziphinde zifakwe okufanelekile ukuze zisetshenziswe kabusha ngokusebenzisa inqubo etholakala lapha
Zingaki izikhwama ze-FIBC nezikhwama ze-PP ezilukiwe ezikhiqizwayo ngonyaka？
Thina khiqiza 800,000 izingcezu Izikhwama ze-FIBC futhi 5 million izikhwama ezilukiwe ngamunye unyaka.Intengo ehamba phambili ifektri yokuphepha esezingeni eliphakeme engu-1000kg epulasitiki enkulu izikhwama ezinkulu ze-FIBC.
Ungakwazi yini ukuklama izikhwama ze-FIBC nezikhwama ze-PP ezilukiwe?
Yebo, Sineqembu eliphelele lokuklama elikusebenzelayo.Sizibophezele ekuxazululeni izinkinga ezahlukahlukene zokupakisha kumakhasimende ahlukile.
Ungakhiqiza isikhathi esingakanani? Kunganjani nge-1 Twenty-Foot Container？
Izinsuku 1-2 zesampulaIdethi yokukhiqizwa kwe-1 Twenty-Foot Container isuselwa ebunzimeni bokuklama.
Inkampani yami inezinsizakusebenza zakamuva, kInqubo yokukhiqiza eyi-rofessional, inqubo yokukhiqiza eqinile, sizibophezele ekuxazululeni izinkinga ezahlukahlukene zokupakisha kumakhasimende ahlukileFuthi iqembu eliqeqeshiwe, ubuchwepheshe bokuqinisekisa ukuthi kukhiqizwa imikhiqizo ephelele.
Ikhwalithi yesiqinisekiso kuqala
Imikhiqizo yethu ithatha ikhwalithi njengegoli lokuqala.Ukulawula ikhwalithi yokuxhumanisa ngakunye kunqubo yokukhiqiza.Ukuze ukhiqize ukuvikelwa kwemvelo okuhle kakhulu.
Insiza eyodwa kuya kweyodwa eku-inthanethi ukuqinisekisa ikhwalithi yesevisi yekhasimende ngalinye.Sikhathalela zonke izidingo zawo wonke amakhasimende.Nqobo nje uma udinga, sihlala sikusiza.
Isixazululo esisodwa sokupakisha
Sinezinto ezahlukahlukene zokupakisha imikhiqizo.Okudingayo, ungakuthola kuwebhusayithi yethu.Uma ungakwazi’Uma ungayitholi, sicela uxhumane nensizakalo yethu yamakhasimende ngqo.
Langaphambilini I-Custom Bulk Bag Fibc Manufacturer Supply 1000kg Big Dimension
Olandelayo: Ikhwalithi ephezulu ye-Fibc Jumbo Bag 1 Ton Bag eyenziwe ngokwezifiso ye-Pp Bulk Bag Supplier
Izikhwama Ezingenalutho Eziningi
Ikhwalithi Ephezulu Ton Ton Bulk
Umoya Bulk Bag
Ikhwalithi ephezulu ye-Fibc Jumbo Bag 1 Ton Bag Yenza ngokwezifiso ...
Isikhwama Esikhulu Sesikhwama Esikhulu Isikhwama SeJumbo Sezilimo